फेसबुके कविता | BLOGSTREET
Posted on February 20, 2011 by Roopess	साँघुरिएको मस्तिष्कले फराकिलो कागज नखोजेको धेरै ‘भो । अल्से औंलाहरुले अग्लो कलम नखोजेको धेरै ‘भो । सपाट इन्टरनेटको गजबको किताबमा लस बसेदेखि अरु धेरै कुराहरु तपशिलमा झुण्डिराखे ।
यस्तो बेला घाम लाग्दा तातेको मगज र झरि झर्दा सेलाएको मगजको अस्तु यहि इन्टरनेटको किताबमाथि फतफत झर्दोरहेछ ।
‘फेसबुक’ भनिने यो किताबमा बेला बेला झरेका यस्तै चिम्टा चिम्टा अस्तुहरु यहाँ पस्केको छु ।
स्वाद लागे ‘लाइक’ गर्नुहोला । स्वाद नलागे ‘कमेन्ट’ गर्नुहोला । झट्ट हेरेर ‘फु..’ गरेर उडाइदिन नि पाइन्छ ।
एउटा सग्लो शहर
पछ्यौराको फेर हुँदै ।
शनै शनै भिजाउँदैछ
यी पन्ना-पन्ना झरिले,
मनको तापले ओभाउन खोज्छु
कतै पखालिन्छन् कि स्मृति भनी !!
झरिमा निस्फिक्री भिजेकी शहर
ओभाएर बसाउँदैछे एकाबिहानै
रंगीन पुतली माहुरीहरु
उड्दैछन् बजार बजारमा फिरिफिरि..
अविरल उकालो लाग्दैछ
एक्लो श्यामश्वेत सडक ।
फुंग उडेको मान्छे
भुईंभरि छायाँ नाप्दै
ताक्दैछ इन्द्रेणी सपना ।
खापाको चेप चेप हुँदै..
केमा साँचेर राख्नु
यो तुरतुरे घामलाई
दिन ढलुन्जेल ?
4 responses to “फेसबुके कविता”	Raj Shah says:	June 25, 2012 at 6:58 AM	मिठो अती मिठो….
Reply	दिवा says:	April 18, 2011 at 3:59 PM	Nice very nice words
Reply	Vhabesh says:	March 27, 2011 at 10:00 PM	मनको तापले ओभाउन खोज्छु
Reply	Aakar says:	February 20, 2011 at 2:46 PM	सबै त भयो ! तर खै, झरी परेपछि, बत्ति बल्ने कुरा चैँ समेटेकै रै’नछ ! झरी परेको दिन, धेरै जना ले धेरै बेर, अघाउञ्जेल फेसबुक चलाए !🙂